नक्कली नोटको रहस्य
५ करोड ६७ लाख ४३ हजार बराबरको नक्कली नोट भेटियो । यसमा ६ जना पनि पक्राउ परे । अत्याधुनिक प्रेसमा छापिएका हजार दरका यी नक्कली नोट बरामद भएपछि यसमा ट्वीस्ट गरियो– यी नोट त फिल्म सुटिङका लागि छापिएका हुन् ।
फिल्म सुटिङ्का लागि नक्कली नोट छाप्ने अनुमति कसले दियो ? प्रहरीलाई किन खबर गरिएन ? ठ्याक्कै सक्कलीजस्तो देखिने नोट किन बजारमा भेटियो र अनुसन्धानको क्रममा मात्र नक्कलीनोटबारे सार्वजनिकीकरण भयो र भनियो– फिल्मका लागि ।
नक्कली नोट फिल्मका लागि छापिएको भए काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा किन राखिए, प्रहरीले विभिन्न ठाउँमा छापा हानेरमात्र यी नक्कली नोटहरु बरामद गरेको हो ।
प्रहरीका अनुसार महेन्द्र बोगटी, सुजित तामाङ, साजन तामाङ, माधवराज वाग्ले, प्रकाश सुवेदी र विकेश नापित रहेका छन् । नयाँ बसपार्क छेउछाउको सुमधुर क्याफे तथा खाजाघरमा खाज खाँदा दिएको नोटबारे प्रहरीलाई सुराक दिएपछि यसमा छानबिन सुरु गरेको थियो । महानगरीय प्रहरी बृत्तका एसएसपी विश्वराज पोखरेलको सक्रियतामा अनुसन्धान यसरी अघि बढ्यो कि केही समयमै यति ठूलो परिमाणमा हजार दरका नक्कली नोट बरामद हुन सम्भव भयो ।
प्रहरीका अनुसार महेन्द्र बोगटी र माधवराज वाग्लेबाट नक्कली नोट छापिएको र यी नोटहरु फिल्म सुटिङमा प्रयोग गर्न छापिएको भन्ने बयान आयो तर यति ठूलो परिमाणमा र अत्याधुनिक प्रेसमा किन छापिए ? यसको जवाफ अहिलेसम्म आइसकेको छैन । विभिन्न व्यक्तिबाट नक्कली नोट भेटिनु पनि रहस्यमय रहेको प्रहरीको दावी छ ।
प्रहरीका अनुसार तेजेनजङ थापाको घरमा रहेको प्रिन्सेस मुभिज प्रालिका सञ्चालक माधवराज वाग्लेको कोठामा खानतलासी गर्दा १ हजार दरका नेपाली नक्कली नोट दुई करोड बाउन्न लाख बरामद भयो । अरु नोट अरु व्यक्तिका डेरा, घरबाट बरामद भएका हुन् ।
वाग्लेका अनुसार फिल्मकै लागि नक्कली नोट छापिएको हो । केही नोटमा फिल्म प्रयोजनका लागि र केहीमा नक्कलीसमेत लेखिएको बताइन्छ तर यसमा अनुसन्धान जारी छ ।
प्रहरीका अनुसार बागबजारका नवज्योति प्रिन्टिङ प्रेसका धादिङ्े प्रकाश सुवेदीले भक्तपुरका विकेस नापितलाई नक्कली नोट छाप्न दिएका हुन् । नापितबाट नक्कली नोट छाप्ने द्ध थान सिटिपी प्लेटसमेत भेटिएको छ ।
प्रहरीले सुल्झाउन नसकेको गुत्थी के हो भने २ लाख ६० हजार ६३ हजार अर्थात यति ठूलो परिमाणमा नक्कली नोट किन छापियो ? फिल्म सुटिङ गर्न केही छापे पनि पुग्ने थियो भने अग्रभागमात्र छापे पनि हुने थियो । फेरि नक्कली नोट छाप्न हुन्न भन्ने कुरा जो कसैलाई पनि थाहा छ, अनुमति किन लिइएन, प्रश्न अनेक छन् ।
यसअघि ५ सय र हजार दरका नक्कली नोटहरु भारतमा छापिएर अउने गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा यस्तो रहस्य खुलेको पनि हो र नक्कली नोटका बारेमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सचेत पनि गराएको छ ।
प्रहरी पनि हर्कतमा आएर सबै प्रकारका अपराधिक हरकतहरुमा सक्रिय भइरहेको र नेपाल प्रहरीलाई सत्य सेवा सुरक्षाको पहरेदारका रुपमा स्थापित गर्ने कार्यमा सिंगो प्रहरी फोर्स लागिरहेको अवस्थामा यति ठूलो परिमाणमा नक्कली नोट छापिनु, पक्राउ पर्नुले खतराका अनेक संकेतहरु देखाएको प्रहरी दावी छ ।
हुनसक्छ, यो अपराधमा कारवाही होला नहोला, दण्ड सजाय के हुने, त्यसको निष्कर्ष आउँदै गर्ला, मुख्य सवाल राजधानीमै यति ठूलो परिमाणमा नक्कली नोट छाप्न सकिन्छ र यसलाई फिल्म प्रयोजनका लागि भनेर मुद्दालाइ यू टर्न दिन सकिन्छ भने यो सवाल नेपाल प्रहरीका लागि ठूलै चुनौति हो । नेपाल प्रहरीले चुनौति स्वीकार गरेको र अपराध न्यूनिकरणमा दिनरात खटिएको जानकारी एसएसपी विश्वराज पोखरेलले दिएका छन् ।
उनका अनुसार नक्कली नोट फिल्म हल, खाजा घर, रेष्टुरेन्ट, यौनकर्मी, जुवाका खालमा प्रयोग हुने गरेको छ । खासगरी लागू औषध कारोबारी र अम्मलीहरुले पनि ज्यादातर प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन् । सक्कलीमा नक्कली मिसाएर गरिने प्रचलनमा सबै सचेत हुनुपर्ने प्रहरी सुझाव रहेको छ । जति धेरै अपराधिकरण बढ्यो, त्यति नक्कलीनोटको जोखिम बढ्ने खतरा रहन्छ । – गोए